“Madaxweyne Muuse Biixi Hoggaamin Aan La Mahadin. W/Q: Cabdinaasir Axmed Abraham Qaybtii 2-Aad. | Caroog News
“Madaxweyne Muuse Biixi Hoggaamin Aan La Mahadin. W/Q: Cabdinaasir Axmed Abraham Qaybtii 2-Aad.
8. SAAMI-QAYBSIGA; Horta saami-qaybsi lama odhan karee WADA-QAADASHADA haddaan wax ka idhaa habka uu madaxweynuhu yeelay waan ka xishoonayaa in aan wax ka qoro. Xikmad Soomaalidii ahayd “LABA WALBA ISA SAARAY OO, LABA ISMA SAARIN” ayaa maskaxdayda ku soo dhacday waxa aanan filayn habkan madaxweynuhu yeelay. Madaxweyne M. Biixi nin weyn oo qabiili ah oo dheg-xumada reerkiisa wixii ku keenaya kala ordi doona ayaan u haystay. Hasa yeeshee, taana waa beeniyay oo wuxuu xukumaddiisa u soo dhistay, sidii oo aan la noolaan doonin! Quruxda Somaliland iyo wada jirkeeda muu dhawrin, midnimada Isaaq dhexdiisa muu dhawrin, aqoon wax kuma soo xulan, Khibrad iyo waayo-aragnimo kuma dooran golahiisa wasiirrada. Hal qodobbaan dhanna u dhaafin waayay oo ah in RABBAAYAD ay wada yihiin Wasiirradiisu ayaan u arkay tiir-dhexaadkii xulashada M. Biixi.
9. DAGAALKA PUNTLAND; Gambadha iyo Tuke-rag oo 22 kilometre isku jira dhaqaaqa ciidanka Somaliland sameeyay macne alle macne ku jiray mar haddii aan xadka la gaadhayn oo aan ahayn;
– In dhaqaale ahaan lagu burburay,
– In niyad-jabin ciidan laga dhaxlay,
– In khasaare naf iyo maal oo labada geesood ba ahi ka dhashay iyo In lagu waayay taageero badan oo dadkii deegaanka lahaa ahi ma jirto. Hadda ba caqliga bed-qabaa wuxuu ku weydiinayaa haddii aan ujeedku ahayn in xadka la soo xidho waxaas oo khasaare ah maxaa loo galay?!
Isku soo-wada-xoori oo in Madaxweynuhu dagaal u xiise qabay oo uu ka raagay sidaana lugu galay dagaal aan loo diyaar ahaan oo rabitaanka Madaxweynaha salka ku haya hasa yeeshee aan xikmad kale ku jirin uun baan dhanna u dhaafin waayay.
FG; Lix goor baan maray intii dagaalku meesha ka socday ee ciidanku is hor fadhiyeen waxa aan ahay nin ugu yaraan qiyaasi kara faraqa labada ciidan agab ahaan, tiro ahaan iyo tayo ahaan ba. Sida oo kale, xaggan Somaliland na waan ka warqabay, xagga Puntland madaxda dawladda ugu sarsarraysa ayaan la kulmayay oo arrintan waxka weydiinayay. Geesta kale labada shacab ee Somaliland iyo Puntland ba ra’yigooda iyana xog ogaal baan u ahaa. Gaar ahaanna beesha Dhulbahante ee la isku kor dilayo aragtiinkooda dagaalka wadaad iyo waranle ba waan ka war qabay.
Intaas oo dhan marka aad isku geyso dadka ugu habboon ee arrintaa wax ka odhan kara ayaan ka mid ahay, faanna maaha, beenna maaha! Dulucda hadalkayguna waa in aan Soomaaliland dagaalkaa ku guulaysan. Sababtuna waa in ciidanka qorshe la’aan lagu dagaal galiyay.